Zanabolana: Ireo sehatra Orbital any an-danitra - 2019 Kat Show News amin'ny fandaharan'ny Beat. Official mpandefa vaovao ny Kat Show, Mpanao ny DIEM Show LIVE
Home » Content Delivery » Zanabolana: Ireo any an-danitra Orbital bola
Tsy maro loatra ankavia izay afaka vouch ho 1945 dia izay mahaliana taona - dia nahita ny faran'ny goavana indrindra maneran-tany ny ady izay efa nisy hatrizay, ny lava indrindra-mihazakazaka US Filoha mandrakizay Franklin Delano Roosevelt (ny 32nd filoha) ho lasa mandrakizay ary nandimby tamin'ny Filoha lefitra Harry S. Truman; ny Firenena Mikambana dia natolotra ary nanorina ny Oktobra tamin'io taona io ihany ary, farany, Arthur C. Clarke, Nanamarika mpamoron-javatra, fizika, mpikaroka tany vaovao anaty rano, sy ny siansa-noforonina mpanoratra, tsara Naminany ny fahatongavan'ny fampiasana ny lehibe sy ny olona-nanao zanabolana.
Mr. Clarke nandeha ho iray amin'ireo telo ambony Science-Fiction mpanoratra ny vanim-potoana sy ny soa aman-tsara ihany koa mialoha ny fahatongavan'ny finday sy ny GPS in 1956. Knighted izy noho ny sivily sy ny siansa zava-bitany tao AD 2000, dia nodimandry any 2008. Ary nanao ny zanabolana faminaniana ao amin'ny Britanika-gazety siansa nanana Wireless World ho toy ny taratasy ho an'ny tonian-dahatsoratra. Afaka hojerentsika izany amin'ny rohy ity: lakdiva.org/clarke/1945ww/1945ww_feb_058.html.
Clarke tena nanao 2 taratasy taona: ny iray dia naniraka tany amin'ny gazety sy ny faharoa-tsipiriany kokoa taratasy izay nahita ny sasany mivezivezy voafetra. Tany am-boalohany, ny zanabolana fiheverana niteraka mitovy kokoa amin'ny sehatra peo. Tsy dia tokony manana onboard mpiasa, ary koa ho toy ny refueling nijanona ho bala afomanga ary koa ny fampiharana ny fifandraisana. Ary nilaza mialoha ny fahatongavan'ny zanabolana amin'ny tokony ho 50 taona, fa be dia be nitranga haingana kokoa noho izany; na izany aza, tsy nisy fepetra ho an'ny fampiasana amin'ny fanampiana ny sambon-danitra araka izay efa nanolo-kevitra. Ny foto-kevitra ny amin'ny toerana Geo-zanabolana (na orbs izay mijanona amin'ny toerana iray, ary manaraka ny fihodinan'ny Tany) Tsy am-boalohany ny Clarke; dia nanorina ny asan'ny Konstantin Tsiolkovsky.
ny Rosiana Satellite Sputnik nahavita mihodina tamin'ny faramparan'ny 1957. Just 4 volana tatỳ aoriana, tamin'ny fiandohan'ny volana 1958, ny US koa nanana zanabolana (Ny Explorer I) ao amin'ny mihodina. Ao 1959, ny US Navy nanomboka ny voalohany Weather zanabolana: Ny Vanguard 2, izay tsy ahavitana izay tena ary koa mialoha saingy nanaraka kely nandritra ny herintaona mahery tatỳ aoriana any 1960 amin'ny TIROS 1, izay nanana tanjona mitovy ho toy ny nodimbiasany; taona io ihany, ny voalohany fifandraisana zanabolana, Ny Echo, natomboka. Ny Echo dia atao zanabolana; dia zavatra ho kivy fotsiny famantarana eny amin'ny. 1962 nahita ny fandefasana ny fifandraisana mavitrika roa voalohany zanabolana: ny fampitàna sy ny Telstar. Ao 1964, ny voalohany amin'ny toerana Geo- zanabolana, Ny Syncom 3, natomboka. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny isan'ny zanabolana amin'ny mihodina dia Nihevaheva teo amin'ny manodidina ny 1000 na izany. Fa ny ho miaramila vitsy no nahazo zanabolana ho tena akaiky-ny sary eto an-tany.
Ny lehibe indrindra artifisialy zanabolana (Fa fantatsika ny (cue mozika mampitolagaga)) dia ny iraisam-pirenena Space Station. Tsy ao anatin'izany ny amin'izao fotoana izao 'vokatra' ny zanabolana nalefa vao haingana, ny isan'ny zanabolana izay efa naniraka ny eo ambonin'ny diman-jato amby enim-polo. Ny zanabolana ankehitriny mameno isan-karazany ny karazana sy ny asa, toy ny hoe: Intelligence / Reconnaissance (Miaramila / Governemanta), SERASERA, sy ny Tany fandinihana (Commercial, toy ny toetr'andro faminaniana sy ny sarintany ny fanaovana), fa ny habakabaka fandinihana, misy ny antsoina hoe ny Hepatita zanabolana (miaramila), izay ampiasaina ho an'ny fiarovana ny nandravany fahavalo sy ny fanafihana balafomanga dia ny nandravany mpanohitra toerana afindran'ny fitaovana (izany hoe hafa zanabolana). Hatramin'izao aloha, afa-tsy ny Etazonia, Shina sy Rosia no afaka handrava lasibatra eny amin'ny habakabaka. Tondroavaratry zanabolana dia ampiasaina ho an'ny GPS. Biosatellites dia natao hitondra velona ara-nofo an-toerana (ankapobeny tsy olona) ho an'ny fikarohana.
Zanabolana manana isan-karazany Mihodidina ampiasaina koa, izay voafidy mifototra amin'ny ny antony (na ny loza sy ny orbital simba). Mihodidina dia manana singa maro; ireo: Altitude, Centric, Eccentricity, fanirian, Pseudo, Special, ary Synchronous. Altitude no zanabolana lavitra tsy ho etỳ ambonin'ny ho orbited. Tany Mihodidina manana 4 havoana, miainga amin'ny ambany (hatramin'ny 1240 kilaometatra), alalan'i antonony (hatramin'ny 22,236), ary Geosynchronous (22,236 kilaometatra ny tsara), ary ny lalana rehetra ho amin'ny Avo Earth mihodina (mihoatra 22,236 kilaometatra, fa mbola eto an-tany misintona saha). Man-nanao zanabolana amin'ny avo eto an-tany dia matetika mihodina outlasted ny ilaina ary apetraka amin'ny avo io mba hiaro azy hiala amin'ny lalana hafa zanabolana; ity karazana mihodina Matetika no antsoina hoe Disposal na tratran'ny mpanara-tokotanim-pasana, na mihodina (by fomba boky, ny volana matetika 238,900 kilaometatra ambonin'ny tany). Rehefa misy zanabolana ao geosynchronous mihodina, ny hafainganam-pandeha dia manodidina orbital 9800 tongotra isan-tsegondra; amin'izao hahavony, fa mitaky ny zavatra 1 sidereal andro mba mihodina ny tany (eo ho eo sidereal andro fotsiny 4 minitra eo ambany kely noho 24 ora), izay mifanitsy amin'ny Tany rotational hafainganam-pandeha.
Ny centric Mihodidina ny mampiasa zanabolana, hatramin'izao, dia: Geocentric (manodidina ny tany), Heliocentric (manodidina ny Masoandro), ary Areocentric (manodidina Mars). Eccentricity dia indrindra na tsia ny zanabolana'S mihodina boribory na boribory lavalava dia. Misy fitsipika 4 ny tany boribory lavalava Mihodidina: geosynchronous famindrana mihodina, geostationary famindrana mihodina, molniya mihodina, ary Tundra mihodina. A Tundra mihodina manana fironana ny 63. 4 ° ary manodidina ny planeta amin'ny sidereal andro; indrindra, dia mijanona ao amin'ny faritra raikitra iray (fa tsy araka ny tena ho toy ny Geostationary mihodikodina) noho ny tany, sy ny haavo miovaova araka ny lamin 'ny ellipse. Ny fisainan'ny mihodina dia ny zanabolana'S hampifandrafy avy any Ginea mihodina madio - dia toy izany, ny tendrony mihodina dia tena efa ho 90 °. Mihodidina sandoka manarona sarotra maro orbital lamina; iray amin'ireo ohatra tsotra indrindra izay retrograde mihodina, izay midika fotsiny raha ny fandehany manohitra ny tari-dalana fa ny vatana selestialy raha orbited ary mihodinkodina; retrograde loatra mihodina no ampiasaina, satria mila solika bebe kokoa ny mametraka maharitra tapaka mihodina. Special Mihodidina ny Sun-synchronous mihodina sy ny volana mihodina, Moon dia somary mihodina be ny zavatra toa izany. Sun-synchronous mihodina dia gidro hafa avokoa; amin'ny endriky ny mihodina ity, ny zanabolana mandalo ny mitovy toerana miaraka amin'izay koa ny masoandro isan'andro; raha tianao, dia afaka mihodina hatao izany fa mitranga foana amin'ny tara-masoandro, izay tena sahaza ny mazava sary an-tsaina, ary misy aloka izany fihaonana any efa ho mitovy toerana isan'andro.
Rehefa nanazava teo aloha, zanabolana ao amin'ny synchronous mihodina manao revolisiona iray manodidina ny vatana selestialy dia mihodikodina ao amin'ny tari-dalana dia ny tenany ary mihodinkodina ao amin'ny same amount of time it takes that body to rotate once; all the different varieties of synchronous orbits are variations or refinements of this. When a zanabolana na vatana selestialy Mihodidina lehibe kokoa vatana selestialy miaraka amin'ny fironana hafa afa-tsy 0 ° ary jerena avy amin'ny toerana raikitra (ankapobeny Nihevitra ho ambonin'ny tany), ny endriky ny hetsika izany zanabolana, Raha jerena isaky ny adiny Toa ny mamantatra ny sasany miovaova toy ny olo-malaza Diso 8 endriky eny amin'ny lanitra; izany dia antsoina hoe fomba iray analemma. Raha mihodina sy ny fihodinan'ny dia tsy tapaka sy synchronous, ny tena miendrika ny hafahafa izany isa 8 lamina tsy hiova. Misy isan-karazany ny antony mamaritra ny lamina ny marina permutation ny toy izany 'mutated' isa valo lamina. A zanabolana with a circular orbital pattern at a 0° incline is said to have a Geostationary (aka “Clarke” – after the author) orbit. It appears to remain in the exact same place relative to the earth at all times at a height of 22,236 miles above the planet. It toa amin'ny toerana; dia, raha ny marina, whizzing alalan'i ny lanitra amin'ny 9800 tongony isan-tsegondra mba hitazona ny toerana mikasika ny tany.
Taorian'ny andiany voalohany amin'ny zanabolana, dia nanomboka nanao trano bebe kokoa sarotra sy lafo vidy zanabolana, manampy bebe kokoa amin'ny lakolosy sy whistles, mihoatra Sela Mpandray Hafanana, fancier fifandraisana arrays sns fa fe-potoana lava, hividy ny zanabolana dia tanteraka ho an'ny fanjakana sy sasany tena vitsivitsy orinasa goavana, noho ny amin'izay ho lany sy ny fahaizany ara-teknika ilaina mba hihazonana ny zanabolana in mihodina. Ity lamina ity dia efa naka tanteraka indray ny tara; fironana vaovao efa nivoaka. Ny zavatra lehibe ao amin'ny zanabolana izao dia kely sy mora vidy kokoa. Antsoina hoe Nano-zanabolana no namely ny lanitra; ny "1- balafomanga / 1-zanabolana"Modelim intsony tsy azo dikaina. Ny lehibe raitra zanabolana mbola ilaina - tsy mahazo ahy ny ratsy; fa izy kosa manaraka onjam- zanabolana Manome fahafaha-teknolojia vaovao. Ankehitriny, iray dia mety ahitana fandefasana maherin'ny telo-polo zanabolana. Noho ny teknolojia fandrosoana, dia maro ireo zanabolana madinika dia afaka manana fahaizana toy izany koa ny Sputnik nanana, afa-tsy ho kely kokoa, mora ary computing be, betsaka Haingankaingana. Noho ny fandaniana sy ny orbital ilaina, ihany no voafantina sasany mangirana eo amin'ny tany azo fiantraikany / hitan'ny iray zanabolana tsy tapaka. Izany dia manomboka ny hanova izao; ny fahatongavan'ny kely sy mora zanabolana dia manokatra Mandeha faran'izay nahay ny safidy vaovao eo amin'ny fifandraisana, Broadcasting sy ny fikarohana.
Arthur C. Clarke Explorer I Geo-zanabolana amin'ny toerana fampitàna zanabolana faminaniana Syncom 3 Telstar TIROS 1 Vanguard 2 Video injeniera	2019-01-04